Fayraska (cudurka difaaca aadamaha jidhku aanu iska ilaalin fayraska) ee saamaysa nidaamka difaaca jidhka ee dabiiciga ah. Marka qof qaba HIV aanu qaadan dawooyinka, caabuqu wuu ka sii xumaadaa oo waxa uu noqdaa AIDS. HIV lama dawayn karo, laakiin dawooyinka HIV waxay xakamayn karaan fayraska HIV. HIV waa cudurka galmadda lagu kala qaaddo (STI). Kondhomku waxa uu ka ilaaliyaa caabuqa HIV.
Waa maxay HIV iyo AIDS?
Iska ilaalinta HIV
La noolaanya HIV
Baadhitaanka cudurada galmada
Ku shubida dhiiga
Nidaamka difaaca jidhka
Xaalada gurmadka ah